Jamaika dia mametraka fameperana vaovao amin'ireo firenena afrikanina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Jamaika dia mametraka fameperana vaovao amin'ireo firenena afrikanina
Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Jamaika dia, miaraka amin'ny fiantraikany eo no ho eo, dia nametraka fameperana ho an'ireo mpandeha avy any amin'ny firenena afrikanina maromaro, taorian'ny fiposahan'ny karazana fiahiana vaovao momba ny SARS-CoV-2, izay fantatra tamin'ny voalohany hoe B.1.1.529.
Ireto avy ny firenena:
• Eswatini (Soazilandy taloha)
Ny olona rehetra tsy olom-pirenena na mponina maharitra ao Jamaika ary efa nitsidika ireo firenena voatanisa tao anatin'ny 14 andro farany dia tsy mahazo miditra ao Jamaika.
Ny olom-pirenena rehetra sy ny mponina raikitra ao Jamaika izay nitsidika ireo firenena voatanisa tao anatin'ny 14 andro farany dia avela hiditra, na izany aza, iharan'ny confinement tsy maintsy arahin'ny fanjakana izy ireo mandritra ny 14 andro.
MISY LALANA HITSANGANA VE?
Ny filohan'ny World Tourism Network Dr. Peter Tarlow, izay mpitondra fivavahana ao amin'ny College Station, Departemantan'ny polisy Texas, ary manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny fiarovana ny fizahantany sy ny fizahan-tany, dia manana torohevitra ho an'ny tontolon'ny fizahan-tany: Tsy fotoana tokony hikorontana izao, fa izao no fotoana hampiasana ny atidohanao.
Ity torohevitra ity dia tonga roa andro taorian'ny nifoha an'izao tontolo izao karazana coronavirus iray hafa, fantatra amin'ny anarana hoe Omicron, na ara-teknika ny variana B.1.1.529.